Weerar sababay dhimasho & dhaawac oo ka dhacay Galgaduud - Awdinle Online
Weerar sababay dhimasho & dhaawac oo ka dhacay Galgaduud
Maleeshiyaad hubeysan ayaa waxaa la sheegay in Maanta qof Shacab ah inay ku dileen qof kalena ku dhaawacmeen degaan ku yaal duleedka degmada Balanballe oo ka tirsan Gobolka Galgaduud.
Maleeshiyaadka oo watay Gaari nooca raaxada ah ayaa tegay degaan lagu Magacaabo Isgoys oo hoostaga degmada Balanballe, iyaga oo halkaasi ku dilay hal qof mid kalena dhaawacay, sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah.
Wararka ayaa waxaa ay sheegayaan in dilka iyo dhaawaca loo geystay dadka Shacabka ah uu salka ku haayo dilal aanooyin qabiil ah oo bilihii la soo dhaafay ka taagnaa degaano ka tirsan Gobolka Galgaduud ee Maamulka Galmudug.
Dabayaaqasii Bishii December ee sanadkii 2021 ayay aheyd markii maleeshiyaad hubeysan ay dad Shacab ku deen degaanka Xeri lugeey ee hoostaga degmada Balanballe Ee Katirsan Galgaduud.
Madaxda Sare ee Galmudug iyo laamaha Amniga maamulkaas weli kama hadlin dilkaas, hayeeshee waxaa uu kusoo aadayaa xilli maleeshiyaadkii ku dagaalamay degaanka Xananbuure ee Gobolka Galgaduud xabad joojin la kala dhex-dhigay.
Previous articleGolaha Amaanka ee QM oo kulan xasaasi ah ka yeelanaya xaaladda Soomaaliya
Next articleKulan u socdo Xildhibaano mucaarad ah & Midowga Musharixiinta